Mpiara-miasa stratejika ho an'ny orinasanao momba ny kojakoja
Niorina tao an-tanànan'ny Hangzhou tsara tarehy tamin'ny 2011, Hangzhou Xingliao Accessories Co., Ltd. dia mpamatsy matihanina ny fampiasa amin'ny lamaody vaovao indrindra, anisan'izany ny satroka / satroka baseball, fehiloha, fonon-tànana, kitapo, ba kiraro ary fehikibo sns.
Manana ny orinasan-tsika any Hangzhou izahay, ary manana ozinina fiaraha-miasa mihoatra ny 30 manerana an'i Shina. Ny orinasanay dia BSCI, SEDEX nohamarinina, ary manana lisansa DISNEY sy NBCU koa izahay. Miaraka amin'ny foibenay any afovoan-tanànan'i Hangzhou, manana biraon'ny sampana any Tonglu sy Guangdong koa izahay, hahafahana manompo tsara ny mpanjifantsika ary miantoka ny famokarana rehetra milamina.
Isan-taona dia mamolavola sy mamolavola vokatra vaovao an-jatony ho an'ny mpanjifanay izahay. Miantsena any ivelany koa izahay mba hahazo aingam-panahy amin'ny fivoaran'ny vanim-potoana vaovao, ao anatin'izany ny lamina, ny loko, ny kofehy ary ny lamba ary ny fironana lamaody.
Ary koa, mieritreritra foana izahay ary manao fikarohana ao amin'ny ozininay, ny fomba ahazoana mihena ny vidin'ny mpanjifanay, ary mitazona ny haavon'ny kalitao sy ny endriny mitovy amin'izany. Araka ny fantatsika fa haingana dia haingana ny lamaody, ary tsy maintsy mihetsika haingana dia haingana miaraka amin'ireo mpanjifantsika isika.
Nanangana fiaraha-miasa marin-toerana amin'ireo mpivarotra / mpanafatra marobe toa ny PEPCO, C & A, NEW LOOK, HEMA, Myer, LPP, JULA, Guess, Inditex & Pepe jeans sns, manomboka amin'ny marika avo lenta izay mitaky vokatra mahafinaritra amin'ny lamaody haingana marika miaraka amin'ny vidiny mifaninana sy vokatra avo lenta indrindra.
Manolo-tena izahay hihaona amin'ny filàna isan-karazany amin'ny mpanjifa tokana miaraka amin'ny fanaraha-maso feno sy haingana amin'ny famolavolana, famokarana ary varotra, miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy amin'ny fandefasana ara-potoana.
Miaraka amin'ny fahaizantsika mamokatra manodidina ny 500,000 isam-bolana, afaka mahazaka baiko kely MOQ 300 izahay, ary koa baiko goavambe toy ny singa 1 tapitrisa mahery. Ny mpanjifa eran'izao tontolo izao dia raisina an-tsitrapo mba hifandray aminay ho an'ny adihevitra sy fiaraha-miasa bebe kokoa. Izahay dia manao izay tsara indrindra vitantsika mba hahatratrarana ny vokatra mahomby amin'ny mpanjifa rehetra.